Nieves Muñoz. Wareysi lala yeeshay qoraaga Dagaalada Aamusan | Suugaanta Hadda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 21/09/2021 12:00 | Wareysiyada, Qorayaasha, Buugaag, Novela
Sawir qaadista: Nieves Muñoz, faylka qoraaga ee madbacadda Edhasa.
Nieves Munoz, Valladolid iyo kalkaaliso xirfadeeda leh, ayaa had iyo jeer la xiriirta suugaanta, sida qoraa sheekooyinka, qoraa ama la -shaqeeyaha joornaalada suugaanta. Iyadoo Dagaaladii aamusnaa ayaa u booday riwaayadda. Aad baad u mahadsantahay waqtigaaga, naxariistaada iyo dadaalkaaga wareysigan halkaas oo uu kaga hadlayo iyada iyo mowduucyo kale oo badan.
Nieves Munoz - Wareysi
HADDA SUUGAANTA: Buuggaaga cinwaankiisu waa cinwaan Dagaaladii aamusnaa. Maxaad nooga sheegeysaa oo xaggee fikraddu ka timid?
NIEVES MUÑOZ: Mid baa jira anecdote ku saabsan cinwaanka. Daniel Fernández, tifaftiraha Edhasa, ayaa faallo u siiyay Penelope Acero, tafatirahayga, taas maxaynu ugu beddeli waynay Dagaallada aamusan, taas oo ka fiicnayd, iyo labadaba waan diidnaa maxaa yeelay waxay gabi ahaanba beddeshaa macnaha. Ma aha dagaallo si aamusnaan ah loo galo (oo ay jiraan sidoo kale), laakiin waa kuwa loo aamusiiyo sabab uun. Taasina waa udub -dhexaadka sheekada.
Dhinac, waxaa jira kuwaa dagaalada gudaha in xaalad aad u daran ay isku dagaallamaan oo aan la tirin. Waxaan ku qanacsanahay (oo aan sidaan u tusaa) in aadanuhu uu karti u leeyahay kan ugu fiican iyo kan ugu xun marka badbaadadiisu halis gasho.
Dhinaca kale, waxaa jira dagaalo aan waligood lagu sheegin buugaagta taariikhda, sida buuggayga, aragtidii iyo waaya -aragnimadii haweenkii ka qaybqaatay Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Wax walba ma aha godod, dagaalku wuxuu gaaray gees walba.
Fikradda asalka ahayd waxay ahayd in la qoro a abaalmarin kalkaaliyayaashii ugu horreeyay ee xirfadle ah yaa ka qaybgalay tartanka. Raadinta macluumaad iyaga ku saabsan ayaan u imid Marie Curie iyo ka -qaybgalka iyada oo ah kalkaaliso mutadawacnimo iyo macallin u ah dhakhaatiirta qalliinka shucaaca. Waa iyada oo gacanta ku haysa akhristaha si ay u barato isbitaal goob iyo waaya -aragnimadiisa, oo kor u qaadda gelitaanka jilayaasha dhabta ah, dumarka caadiga ah, kalkaaliyayaasha, mutadawiciinta, haweenka beeraleyda ah iyo xitaa dhillaysiga. Waa sheeko -xariir, sidaa darteed dhagarta kala duwan waxay isugu yimaadaan hal hal qeybtii labaad ee sheekada.
NM: Waxaan ahaa akhriste hore, laakiin kuwa ugu horreeya ee aan xasuusto waxay ka yimaadeen ururinta Hollister, oo aan wada akhriyay. Halkaas ayaan ka aaday Shantii, Toddobada Sir, Saddexdii Baadhe, ururinta Doon doon... Tan ugu dambaysa waxaan ku xusuustaa kalgacal gaar ah Gabadha Scarecrow y Siligga gadaashiisa.
Waxaan qabaa a Xusuusta qadhaadhka ah ee mid ka mid ah sheekooyinkii iigu horreeyey. Sheeko ayaan u qoray dugsiga, mala -awaal ku saabsan ugaadhsade toogtay deero iyo sheekada kaynta ayaa ugaadhsigii u beddelay deero si uu u ogaado khasaaraha uu geystay. Macalinka ayaa i weydiiyay inay i caawiyeen waxaan ugu jawaabay maya. Maalintii oo dhan waxaan hor taagnaa raashka jaakadda, waxaa la igu ciqaabay been.
NM: Dhab ahaantii Ma haysto qoraa madax ah. Waan akhriyay dhammaan qaybaha hoose waana ku adag tahay sidaas. Laakiin waan magacaabi doonaa qaar ka mid ah tixraacyadayda.
- khiyaali, laatiinka ahdabcan, laakiin sidoo kale Dhamaadka ama dhawaanahan Shiinaha Miéville.
-Sheekooyinka sayniska, Ursula K. Le Guin iyo Margaret Atwood waa cajiib.
—Na naxsan, runtii waan jeclahay qoraa Isbaanish ah, David jaso. Kadibna Classics -ka, Poe ama Nin ka yimid Maupassant.
- Riwaayad taariikhi ah, Amin Maalouf, Mika Waltari, Nuux gordon, Toti Martínez de Lezea o Malaaqyada Irisarri.
- Riwaayad casri ah, Sándor Marai, Donna Tarsi aan u noqdo mid casri ah oo aan weli si fiican loo aqoon laakiin yaa wax badan ka sheegi doona: Antonio Tocornal.
- Ku saabsan buugaagta dambiyada, waan qaadan doonaa Stieg Larsson, Dennis Lehane y Yooxanaa.
- Oo jaceyl leh Paulina Simmons y Diana Gabaldon.
NM: Waa maxay su’aasha adag. Waxaan u tooganayaa nostalgia. Waxaan akhriyay buugaagta Anne ee Gabdhaha Cagaaran qaan -gaarnimada iyo waqti ka waqti, maalmaha cawlka, mar kale ayaan akhriyay. Deganaansho ayay ii keenaan. Markaa waan ilaaliyaa Ana Shirley.
NM: Anigu waan ahay qoraa waddada ka baxsan xoog, maxaa yeelay haddii aanan ka faa'iidaysan meel kasta iyo wakhti aan wax ku qoro, waligay waxba ma dhammayn lahaa. Waxa kaliya ayaa ah inaan la il daran yahay tinnitus (waxaan maqlaa buuq joogto ah) iyo Waxaan doorbidaa inaanan si aamusan wax u qorin maxaa yeelay way i dhibaysaa. Marka waxaan saaray TV -ga, muusigga, ama haddii aan bannaanka joogo, qaylada jawiga ee waddada.
NM: Asal ahaan sida su'aashii hore, markay iga tagaan oo aan qaadan karo laptop -ka, meel kasta iyo goor kasta.
NM: Su'aashan waan saadaaliyay. Waxaan jecelahay inaan beddelo nooca akhrinta, haddii kale waxaan ka caajisi lahaa akhriska.
NM: Waan la jiraa Tooletum, de Mireia Gimenez Higón ka dib marka la dhammeeyo Dib loo soo nooleeyay, lamaanaheyga Aad baad u mahadsan tahay. Midda koowaad waa hiwaayad lagu dhigay Toledo qarnigii 1755aad iyo tan labaad oo ka sheekeyneysa dhacdooyinkii ka dhacay dhulgariirkii Lisbon ee XNUMX.
Justo hadda waan dhammeeyay qabyo -qoraalka koowaad ee sheekadayda labaad, oo horeba gacanta ugu hayey tifaftirahayga, sidaa darteed waxaan fasax ka qaadanayaa dhawr maalmood, waayo habsocodku aad buu u xoog badnaa.
NM: Hadda uun baan imid dunidan mana garanayo haddii aan wax ka sheegi karo. Waxay ila tahay inuu jiro mid dalabka arxan darrada ah ee wararka tifaftirka oo aan iibin badnayn. Inaad xiise u qabtid sheeko -curis muddo ayay ku adag tahay daabacaadaha badan. Dhinaca kale, the dhibaatada burcad -badeednimada Waa aafo aan xal loo helin. Iyada oo hawsha ay ku lug leedahay qorista sheeko wanaagsan, waa wax laga xumaado in aan si wanaagsan loo qiimeyn.
Waxaan u diray qoraal-gacmeedka aniga oo aan ka filayn, xaqiiqda ah in aan dhammeeyey qorista sheeko-qoraaleed ka kooban 540 bog ayaa durba ii ahayd guul. Markaa wax kasta oo ka dambeeyay waxay ahaayeen cajiib, gaar ahaan fikradaha akhristayaasha ee taageeray jilayaasha iyo sheekooyinkooda. Anigu taas uguma beddelo wax kasta oo adduunka ka jira.
NM: Waxaan had iyo jeer wax ka helaa khibrad kasta, xitaa kuwa ugu adag. Maalin walba waxaan la noolahay xanuun, dhimasho iyo masiibo. Iyo xitaa xaaladaha ugu adag, sheekooyin qurux badan ayaa soo baxa. Waxay ku xiran tahay wehelnimada, waxa aad dadka kale ku lug yeelatid, waxaad adigu wax ka geysato. Sidii aan ku sheegay bilowgii wareysiga, mid kasta oo naga mid ah wuxuu awoodaa kan ugu fiican iyo kan ugu xun, mar walba waxaan isku dayaa inaan raadiyo wanaagga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Wareysiyada » Nieves Muñoz. Wareysi lala yeeshay qoraaga Dagaalada Aamusan